अदितीलाई बिर्सियो फिल्म क्षेत्रले ? – Mero Film
अदितीलाई बिर्सियो फिल्म क्षेत्रले ?
एउटा सफल फिल्म खेलेपछि त्यसमा काम गर्ने मुख्य हिरो र हिरोइनले त मारामार काम पाउनुपर्ने हो । तर, सबैमा त्यस्तो लागू नहुने पनि रहेछ । कृ फिल्मबाट डेब्यू गर्दा अभिनेत्री अदिती बुढाथोकीलाई सबैले यीनले केही गर्छिन् भनेरै हेरेका हुन् । अदितीले पनि फिल्मका लागि सकेको काम गरेकी नै हुन् ।
तर, फिल्म चलेपछि मुम्बई फर्किएकी नेपाली फिल्मकी अभिनेत्रीलाई फिल्म क्षेत्रले संझिएको पाइएको छैन । अदिती बुढाथोकीलाई कृ चलेपछि न त यसका निर्माता सुवास गिरीले नै दोहोर्याउने सोच बनाए, न भूवन केसीले नै खेलाउने सोच बनाए न अरु निर्माता नै ताते ।
अदिती भारतमा सफलता हात पार्दै छिन् । उनको सामाजिक साइटमा आँखा घुमाउने हो भने उनी मुम्बइमा खुशी छिन् । तर, नेपाली फिल्ममा अदितीको डिमाण्ड जुन तरिकाले बढ्नुपर्ने थियो, त्यो अनुसार नबढेको देखियो ।
अदिती आफूले फिल्म खेल्न हतार नगर्ने बताउँछिन् । तर, फिल्म रिलिज भएको १० महिना बित्दा पनि उनलाई नेपाली निर्माताले किन चासो नदेखाएका होलान् ? कि अदिती आफैले नेपाली फिल्ममा रुची नदेखाएकी हुन् ? कि, उनलाई अनमोल जस्तै स्टारको फिल्मको प्रतिक्षा हो ?
२०७५ कार्तिक ९ गते १५:२० मा प्रकाशित